Yangon Thu Michelle - Page5of5- Official Website
Horse Riding Photo Shoot
Portrait & Glamor April 30, 2018
I found my expensive hobby and it is horse riding. It is open to many people and is an opportunity to[…]
Circular Railway of Yangon
Places and landmarks, Video April 27, 2018
တစ်ပတ် တစ်ပတ် ဘယ်သွားရင်ကောင်းမလဲ ဘာလုပ်ရမလဲ တွေးရတာ ဦးနှောက်လည်း အရည်ခမ်းကုန်ပြီ။ ပြီးရင် ရန်ကုန်သူမီရှဲ သွားတဲ့နေရာကို ပြောသာပြောရတာ …. သွားလည်ကြရဲ့လား မသိ … သွားရပြီး ပြောရတဲ့လူကတော့ လျှာအပြားလိုက်ထွက်နေပြီ။ သွားဖြစ်ရင်လည်း အကျိုးအကြောင်းလေး ပြန်ပြောကြပါဦး။[…]
Ching Tsong Palace
Portrait & Glamor April 21, 2018
This isavery rare moment to takeaphoto inside of this Lim Ching Tsong Palace. It is prohibit to[…]
Places and landmarks, Video April 20, 2018
ရန်ကုန်သူမီရှဲရဲ့ ဒီအပတ်သွားခဲ့တဲ့နေရာက ဝေးဝေးလံလံ ကုက္ကိုင်းကုန်းကျော်တံတားအောက်နားက အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း (Lim Ching Tsong Palace) ကို ရောက်ခဲ့တယ်။
Festivals, Video April 13, 2018
ဒီအပတ်အကြောင်းကတော့ သင်္ကြန် (water festival) ကာလ ရောက်နေပြီဖြစ်လို့ သင်္ကြန်အထူး အစီအစဉ်အနေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ ဘာတွေထူးခြားနေလဲ လိုက်စပ်စုထားတယ်။
Beauty, Video April 6, 2018
အငြိမ်မနေနိုင်လွန်းသူ ရန်ကုန်သူမီရှဲဟာဆိုရင် လက်ရှိဆံပင်အရောင်ကို ငြီးငွေ့လွန်းလို့ ဒီအပတ်တော့ ဆံပင်အရောင်ဆိုးမိပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်က Salons and Spas အကြောင်းပါပဲ။
To Prevent From Child Abuse
Health, Video March 30, 2018
ဒီအပတ်တော့ ဘယ်မှမရောက်ဖြစ်ပဲ ဒေါက်တာသက်စုထွေး Thet Htwe (Strong Flowers Sexuality Education Service) ဆီကို child abuse နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိချင်တာရှိလို့ သွားမေးဖြစ်တယ်။
Articles, Women Empowerment March 24, 2018
International Women’s Week Bazaar မှာ #PressforProgress #Respecther #Respect_Women ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
Thrift Market Cloths
That is how I look like wearing thrift market cloths. Even my the attendance of dinner ceremony, I choose to wear[…]
ကြည့်မြင်တိုင်ညစျေး – Thrift Market
Places and landmarks, Video March 16, 2018
ဒီအပတ်တော့ ကြည့်မြင်တိုင်ညစျေး ကို သွားလည်ခဲ့တယ်။ တခြားညစျေးတွေလို ဂျင်းမဟုတ်ဘူး။ စျေးသက်သာတယ်။ ပစ္စည်းအစုံရတယ်။ ကြည့်မြင်တိုင်ညစျေး ရှိနေတာ ကြာလှပြီ။ ဒါပေမဲ့ အမြင်သစ်နဲ့ သွားလည်ကြည့်တော့လည်း စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ အကြိုက်ဆုံးက စားစရာတွေ ….. ပေါမှပေါ ….။ စားခဲ့တာက[…]
The Burmese Photographers Exhibition
Activities, Places and landmarks, Video March 9, 2018
ဒီအပတ် သွားခဲ့တဲ့နေရာကတော့ အတွင်းဝန်ရုံး (ဝန်ကြီးများရုံး) လို့ခေါ်တဲ့ နေရာမှာ မြန်မာဓာတ်ပုံဆရာများ – The Burmese Photographers ဓာတ်ပုံပြပွဲ ရောက်ခဲ့တယ်။ လူတိုင်းတော့ သွားနေကြတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ မရောက်ဖြစ်တဲ့ မိဘပြည်သူ ညီအစ်ကို ညီအစ်မ မောင်နှမ[…]
Video, Women Empowerment March 2, 2018
လမ်းသွားရင်း စနောက်ခံရတာ၊ အကြည့်စူးစူးတွေနဲ့ အကြည့်ခံရတာတွေက အမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့ ကျင့်သားရနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း မဖြစ်စေချင်ကြပါဘူး။ အမြဲတမ်း ဒီလိုဖြစ်တာတွေက အဝတ်အစားကြောင့်၊ မသွားသင့်တဲ့နေရာသွားလို့၊ ညဘက်အပြင်ထွက်လို့၊ တစ်ယောက်တည်းသွားလို့ စတဲ့ အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကို ခံရတဲ့အမျိုးသမီးကိုပဲ အပြစ်ပြောချင်ကြတယ် ……။
Places and landmarks, Video February 23, 2018
ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးချုပ် ဦးသန့်နေအိမ် ( U Thant House) ကို ဒီအပတ်အားရက် သွားလေ့လာကြမယ်။ ဦးသန့်ပြတိုက် ( U Thant House ) ဖွင့်တဲ့အချိန်က သောကြာ စနေ တနင်္ဂနွေ မနက် ၁ဝနာရီကနေ[…]
Festivals, Video February 16, 2018
ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ နှစ်သစ်ကူးအချိန်အခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံက တရုတ်လူမျိုးတွေကော နှစ်ကူးမှာ ဘာတွေလုပ်ကြလဲ …..။ အဲ့ဒါတွေကို မီရှဲက ဘယ်လိုတွေ ပါဝင်စပ်စု (အဲ့လေ) ဆင်နွှဲခဲ့လဲ ကြည့်ကြည့်ရအောင် …. ဒါနဲ့လေ တရုတ်ရိုးရာကန်တော့တဲ့ သတ်သတ်လွတ်မုန့်တွေရဲ့တရုတ်နာမည်ကို မြန်မာအသံထွက်နဲ့ ရေးပြပါလား[…]
Activities, Video February 12, 2018
Budget presents you can find for your girlfriend in Myanmar during Valentine’s Day. This is my very first video for my[…]